Xisbi ka mid ah Xisbiyada ugu waaweyn Norwey oo u olaleynaya in la jaro lacagta howlgabka ee Muhaajiriinta. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Xisbi ka mid ah Xisbiyada ugu waaweyn Norwey oo u olaleynaya in...
Xisbi ka mid ah Xisbiyada ugu waaweyn Norwey oo u olaleynaya in la jaro lacagta howlgabka ee Muhaajiriinta.
Xisbiga Frp oo ka mid ah axaabta ka jirta wadanka saameyn weyna ku leh siyaasada iyo arimaha soo galootiga Norwey ayaa haatan bilaabay u olaleynta in la joojiyo lacagta howlgabka ah ee lasiiyo dadka soo galootiga ah ee aan buuxin sharuudaha lacagtaasi lagu qaato.
Wargeyska Aftenposten ayaa qoray in xisbiyada Frp iyo SV ay soo jeediyeen in la kordhiyo lacagta howlgabka ee ugu yar ee lasiiyo dadka gaara 67 sano, iyadoo islamarkaana fikir arintaasi ka baxsan uu dhiniciisa u wato xisbiga Frp kaas oo doonaya in la joojiyo lacagha howlgalbka ah ee lasiiyo dadka muhaaritiinta ee wadankaan ku noqda howlgabka balse aan mudo dheer ku nooleyn ama ka shaqeyn Norwey islamarkaana aan buuxin sharuudaha howlgabnimo ee lacagta lagu qaato.
“Haddii aad timaadid Norway oo aadan ku noolayn halkan waqti kugu filan ama aadan shaqeyn muddo dheer oo aad ku qaadan karto lacagta hawlgabka, markaa waxaa ku habboon kaalmada dhaqaale ee bulshada ( lacagta ay bixiso NAV)” ayuu yiri Madaxa gudiga shaqaalaha iyo arimaha Bulshada xisbiga Frp Erlend Wiborg.
Marka aad ku nooshahay Norwey ee aad dooneyso in aad qaadata Lacagta howlgabka buuxa waxaa shardi ah in aad wadanka ku nooleyd 40 sano taas oo aad xaq u heli doonto marka aad gaarti da`da 67 sano balse wixii 40-kaas sano yar qofku waxa uu xaq u leeyahay in lasiiyo lacagta howlgabka ee ugu yar taas oo ah mid waxyar ka badan lacagta nolosha ee ay bixiso NAV (lacagta ceyrta) taas oo xisbiga Frp uu u arko in ay cadaalada ka fogtahay.
Halkaan ka aqriso sida loo helo lacagta howlgabka iyo qoodoonyinka loogu talagalay. NAV
Xisbiga Frp ayaa horay uga tirsana xukuumada haatan ka jirta Norwey balse markii dambe isaga baxay, wallow intii ay ka mid ahaayeen ay ku dadaaleen in ay joojiyaan qaar ka mid ah taageeada dhaqaale ee lasiiyo qaar ka mid ah familada soogalootiga.
Xigashada warka Aftenposten.
Previous articleArmy operation kills 5 al-Shabaab militants in Somalia.
Next articleLillestrøm oo fureysa xarumaha jimicsiga iyo shaqaale ku dhintay baraf la go,ay (Wararka Norwey)